Puntland oo fashilisay qarax miino oo lagu aasay bartamaha magaalada Bossaso. – Radio Daljir
Bossaso, Apr 20 – Ciidamada booliska ee Puntland ayaa maanta soo saaray waxyaabaha qarxa oo lagu aasay waddo halbawle u ah magaalada Bossaso ee xarunta ganacsiga Puntland, ka dib markii uu qof shacab la xiriiray ciidamada booliska kaasi oo arkayey markii walxahan la aasayey.
Wasiirka ammaanka ee Puntland ayaa Gen, Yuusuf Axmed Kheyr oo shir jaa?id ku qabtay xaruntiisa magaalada Bossaso ayaa sheegay in haddii uu qaraxani u fulilahaa sidii ay shar wadayaashu ugu talagaleen uu geysan lahaa khasaare aan horay loo arag.
?Ilaahayna ma yaqaanaan, ummadana kama xishoonayaan, dalka iyo dadkana uma naxayaan ee kaliya waxay rabaan inay qaarajiyaan dadka magaca ku leh bulshada dhexdeeda? ayuu yiri Yuusuf Axmed Kheyr wasiirka amniga ee Puntland.
Wasiirka oo ay hareera fadhiyeen wasiirka Maaliyadda Faarax Cali Shire iyo Wasiirka dekadaha Siciid Maxamed Raage ayaa ka codsay bulshada inay ku daydaan muwaadinkaan sheegay qaraxa uu arkay ee la soo xiraay dawladda, waxaana uu intaasi sii raaciyey inay dawladdu qaadayso tallaabo kasta oo arrimahan looga hortago.
Qaraxaan ayaa noqonaya kii 12-aad ee ay fashiliyaan ciidamada Puntland muddadii ay jirtay dawladda xilka haysa ee Madaxweyne faroole.